အင်ဂလန် ပါလီမန်လွှတ်တော် – UK Parliament – III | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အင်ဂလန် ပါလီမန်လွှတ်တော် – UK Parliament – III
အင်ဂလန် ပါလီမန်လွှတ်တော် – UK Parliament – III
Posted by Kyaemon on Sep 24, 2012 in Community & Society, Education, History, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel |5comments
ဒေါ်စုရောက်ခဲ့တဲ့ အင်ဂလန် ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြရအောင် – အဆက်
အောက်လွှတ်တော် ဥက်ကဌ Speaker ထိုင်ခုံရဲ့ကျောဘက်က
House of Commons Chamber –aset on Flickr
ခန်းမရဲ့ဘေး နှစ်ဘက်နှစ်ချက်က ဧည့်ခန်းတန်းလျားတွေက
ဆွေးနွေးတဲ့အဆိုကို ထောက်ခံသူများအခန်း နဲ့ မထောက်ခံသူများအခန်း
ပုံထဲဟာက မ ထောက်ခံသူ များအခန်းပါ၊
အောက်က “လမ်းပြ” လင့်ခကိုနှိပ်ရင် အထက်ပါပုံကိုတွေ့ပါမယ်၊
အ “စက်” လေးကိုထပ်နှိပ်ရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ရှုဒေါင့်ကနေ
အောက်လွှတ်တော်ခန်းမ ကို တ “ဝ” ကြီးကြည့်လို့ရတာ၊
House of Commons Chamber – UK Parliament
ကိုယ့်ရဲ့ မျှားဦး ကိုဖိထားပြီး အပြာမျှား အတိုင်းဆွဲရင်ပုံက
+ – တို့က ပုံကိုချဲ့တာ ကြုံ့တာ အတွက်ပါ
Bombed House of Commons 1941
၁၉၄၁တုန်းက အောက်လွှတ်တော်က ဗုံး ထိပျက်စီးခဲ့တာ၊
ဒုတိယကမ်ဘာစစ်ကြီး ၁၉၄၁ မှာ Westminster နန်းတော် (ပါလီမန်လွှတ်တော်)က ဗုံးထိတာ ၁၄ ကြိမ်၊
၁၉၄၁ မေ လ ၁၀ – ၁၁ ညကအဆိုးဝါးဆုံး၊ အောက်လွှတ်တော်ကလုံးဝပျက်စီးပြီးလူသုံဦးသေခဲ့တာ၊
During the second world war, the Palace of Westminster was hit by bombs fourteen times. The most serious attack occurred on the night of 10-11 May 1941. On that night the Palace was severely damaged, the chamber of the House of Commons was destroyed and three people were killed. This photograph shows Members’ Lobby looking through into the Commons Chamber.
Lords မှူးကြီးမတ်ရာတို့စည်းဝေးရာ အထက်လွှတ်တော်
၁၉၉၉ ကထုတ်ပြန်တဲ့ မှူးကြီးမတ်ရာအက်ဥပဒေ
သားသမီးတွေက လူကြီးမိဘတို့ရဲ့ Lords မှူးကြီးမတ်ရာ ရာထူးဘွဲ့ အရိုက်အရာတွေကို ဆက်ခံပြီး
(၉၂ ဦး ကလွဲလို့)
Passing of House of Lords Act 1999
This day, 11 November 1999, was the last time all hereditary Peers sat in the Lords. The House of Lords Act 1999 came into force on 11 November 1999, the last day of the 1998-99 parliamentary session. The Act removed the rights of all but 92 hereditary Peers to sit in the House of Lords.
House of Lords Chamber –aset on Flickr
အောက်လွှတ်တော်ကိုအကြံပေး အထောက်အကူသာ လုပ်ဆောင်နိုင်တာ၊
အထက်လွှတ်တော်က အောက်လွှတ်တော်ရဲ့အဆိုကို မကျော်လွှားမပိတ်ပင်နိုင်ပါ၊
(ဘုရင်မ ကခန့်တာရယ်၊ဘုန်းကြီးဂိုင်းချုပ်တွေရယ် က
(စစ်တပ်ကခန့်တဲ့ ၂၅% က လူထူရွေးကောက်တင်မြှောတ်တာမဟုတ်လို့
လူထုကိုယ်စလှယ် အစစ်အမှန် မဟုတ်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်သလိုပါဘဲ)
The Lords acts asarevising chamber for legislation and its work complements the business of the Commons.
အထက်လွှတ်တော်ခန်းမ ကို တ “ဝ” ကြီးကြည့်လို့ရတာ၊
House of Lords Chamber – UK Parliament
Lords အမတ် တို့အတွက်ဧည့်ခန်းကြီး၊
အလားတူ ခန်းမရဲ့ဘေး နှစ်ဘက်နှစ်ချက်က ဧည့်ခန်းတန်းလျားတွေက
ပုံထဲဟာက ထောက်ခံသူ များအခန်းပါ၊
Votes in Parliament are called divisions. This is because Members physically divide or move into separate areas (the division lobbies) when voting, according to whether the Member agrees or disagrees.
The division lobbies run either side of the Chamber in the House of Commons and the House of Lords. In the Commons they are called the ‘Ayes’ and the ‘Noes’ Lobbies and in the Lords they are called the ‘Content’ and the ‘Not Content’ Lobbies.
kyaemon ရေ သဘောကျသဗျ
တ ၀ ကြီးလျှောက်ကြည့်လို့ပြီဗျို…..
ကြီးကျယ် ခန့်နားလှလိုက်တာ ..
မထိရက် မတို့ရက် အလှထိုင်ကြည့် ချင်စရာကောင်းပါဘိ …
ကြေးမုံ ဂျီး says:
အဲဒါ တရုတ်ပြည်က အကြွေးနဲ့ သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ နန်းဒေါ်ဂျီးလား… လှဒယ်နော်..။ အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် အဲလီဇဘက်ဘုရင်မဂျီး နတ်ရွာစံရင် ကြေးမုံဂျီးကို ဦးကြောင်က ရွှေလက်တွဲပြီး အဲဒီနန်းတော်ကြီးမှာ ဘိသိက်ခံနန်းတက်မယ်လို့ ဂတိပေးထားတယ်။ အဲဒီကြမှ ရွာလုံးကျွတ်မီးခိုးတိတ် နန်းတော်ထဲ ထမင်းဖိတ်ကြွေးအုံးမှာ…။
ဦးကြောင်ကြီး အဲဒီရွှေပုလ္လင်ပေါ်တက်ထိုင်ရင်တော့ ဥပတိရုပ်နဲ့တော်တော်လိုက်ဖက်မှာ